Milina Lathe metaly amidy, CNC, Manual, mpanamboatra sy mpamatsy Sina
Eto ianao: an-trano1 / Milina metaly Lathe amidy
Raha te-hikirakira ny zana-kazo na ny karazana kapila vita amin'ny metaly ianao, hahazoana ny endrika ivelany mihiratra kokoa, hikirakira ny kofehy ivelan'ny bara boribory, hikirakira ny lavaka anatiny, na hanodinana ny tarehy farany hampiorina kokoa ny tarehy farany, avy eo safidy tsara ny lathe vy antsika. Ny Lathes metaly dia be mpampiasa amin'ny fanodinana vy, fandefasana, solika, fiara, fitrandrahana arintany ary sehatra hafa.
Raha ny amin'ny fisafidianana ny milina lathe, miankina indrindra amin'ny halavany, habeny, lanjany ary ny fomba fanodinana ny workpiece io. Latina marindrano, latte mitsangana no azo fidina. Raha famokarana be dia be, hevero tsy voatery fa ny lathe CNC, fa raha kely dia kely ny fanodinana workpiece, dia fako kely ny lathe CNC, azonao atao ny misafidy ny lathe manual. Ny kalitaon'ny lathe-tsika dia miorina, avy amin'ny loharanon'ny kalitaon'ny fanaraha-maso, ny masontsivana feno. Tonga soa ny fanontanina.
Masinina latina Cnc
Ny servo motor rotation dia fehezin'ny rafitra CNC, feed automatique, mety amin'ny fikarakarana batch
Masinina latina mitsangana
Mihodina mitsivalana ny sangan'asa ary mihetsika ambony sy ambany ilay mihetika. Izy io dia mety amin'ny workpiece misy lanjany lehibe sy savaivony
Masinina lathe adidy mavesatra
Lathe spindle amin'ny lavaka dia somary lehibe, ny halavan'ny fanodinana dia mety mihoatra ny 10 metatra, mahazaka ny lanjan'ny workpiece hatramin'ny taonina maro
Mety amin'ny fametahana fantsona lava sy lehibe amin'ny savaivony, somary lehibe ihany koa ny vavahady spindle
Fanaraha-maso fakan-tsakafo sy fanitsiana izay mifanaraka amin'ny fanodinana tsy batch
Latina fandriana banga
Mametraha lasely azo esorina amin'ny toeran'ny lathe fandriana, Ampitomboy ny savaivony fihodinan'ny karazana lathe disk
Masinina lozisialy ratsy
Ny vatan'ny farafara dia manana zoro mitongilana, famoahana puce mety
Manampia lohan-doha sy axis C amin'ny lathe amin'ny fikosoham-bary sy ny fandavahana, mandeha ho azy
Masinina farany latina
Mety amin'ny fikarakarana workpiece kely, vidiny mora, Ny lanjan'ny workpiece dia kilao an-jatony
Araka ny maody fanaraha-maso dia azo zaraina amin'ny CNC sy amin'ny mahazatra
Araka ny zoro ny fandriana, azo zaraina ho an'ny fandriana fandriam-pahalemana mirona
Araka ny lasely, dia azo zaraina amin'ny latina amina lasely sy latina mahazatra
Ny milina lathe metal dia karazana fitaovana milina fanapahana vy manerantany, be mpampiasa, azo avadika boribory, lavaka ary farany.
Rehefa tsy ampy ny halavan'ny masinina, ny workpiece dia afaka mamakivaky ilay lavaka afovoan'ny spindle mba hanitarana ny elanelan'ny masinina. Izany dia mitaky ny savaivon'ny ampela amin'ny alàlan'ny lavaka mba ho lehibe kokoa noho ny savaivon'ny ny workpiece.
Ny indostrian'ny fiara
Fa maninona no lozabe toy izany? Boky torolàlana momba ny fiarovana amin'ny asa lathe.
Lathe dia fitaovana masinina mahazatra, be mpampiasa amin'ny fanodinana vy. Mampidi-doza koa izy io raha tsy ampiasaina tsara ny lathe.
Lathe dia milina mavesatra fanodinana vy, ny vy dia vy. Matetika ny lanjan'ny mihoatra ny 1 taonina, raha ny lathe lehibe, ny lanjany dia mety hahatratra mihoatra ny folo taonina. Rehefa mijanona ny lathe, dia mora ny maratra raha misy olona tsy lavitra eo lavo ka mikasika ny loba.
Rehefa manomboka mihazakazaka ny lathe, ny spindle hafainganam-pandeha haingam-pandeha dia mamily ny fitaovana hampiasana azy, raha sendra lozam-pifamoivoizana ilay izy, dia mivoaka ny claw, mora mitarika ratra mafy, tsy latsa-danja noho ny lozam-pifamoivoizana. Na ny volo lava, ny tanany lava, raha tsy voalamina tsara, koa mora idirana amin'ny milina.
Ny herinaratra ampiasain'ny lathe amin'ny ankapobeny dia herinaratra indostrialy, raha sendra lozam-pifamoivoizana herinaratra, atahorana hikorontana ny herinaratra
Ho an'ny mpandraharaha
Ny 1 dia tokony hahalala ny fomba fampiasana ny lathe, raha vao novice, dia tsy maintsy manana traikefa amin'ny fiasan'ny mpiasa eo akaikin'ny torolàlana, raha tsy izany dia tsy mahazo miasa amin'ny lathe.
2 tandremo ny manao akanjo, tsy maintsy manenjana ny cuff, ny fitafiana dia tsy mahazo manana kofehy, na fehikibo lamba mihantona. Tsy misy fonon-tànana, tsy misy peratra ary tsy misy famataranandro. Manaova mpiaro ny maso matetika.
Ho an'ny lathe
Famatsiana herinaratra 1, tsy maintsy miantoka fa tsy misy famoahana herinaratra, miorina tsara ny tariby amin'ny tany
2 Ny ampahany amin'ny fanosorana dia tsy maintsy misy menaka
3 Ny lathe dia tsy maintsy mijanona tsy mihazakazaka rehefa mamoaka ny sangan'asa na manamarina ny maha-marina ny sangan'asa
4 hen ny lathe dia mihazakazaka, ny mpiasa dia tokony hitazona elanelana kely amin'ny lathe
5 Rehefa mifanila ny lathes maromaro, mitongilana amin'ny zoro iray
6 Aza mampiasa ny tananao hanadio ny fanoratana vy
7 Alohan'ny hiasana lathe dia alao antoka fa voahidy ny chuck, alao antoka fa voahidy ny fitaovana
8 Alohan'ny hametrahana sy hamoahana ny latte mavesatra dia tokony hapetraka eo anelanelan'ny sanganasa sy ny lalamby fitarihana ny tapa-kazo iray mba tsy hianjera tsy nahy ilay sangan'asa.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny cnc lathe machine sy ny milina lathe manual?
Ny tena mampiavaka azy roa dia ny fifehezana azy ireo.
Ny fomba fanaraha-maso ny lathe CNC: rafitra CNC - mpanara-maso - maotera servo
Ny mpampiasa dia mila manapaka ny programa amin'ny alàlan'ny programa code G, ampidirina ao amin'ny rafitra CNC an'ny lathe, ny lathe dia hahatsapa ny fanodinana mandeha ho azy ny workpiece, alohan'ny fahavitanana, tsy misy fandraisana an-tanana intsony.
Fomba fanaraha-maso ny lathe tsotra: mila fandidiana tanana, tsy azo atao programmed control, betsaka no tsy azo programme.
Tokony hanao fonon-tànana ve ianao rehefa miasa latina?
Tsy vitan'ny hoe tsy afaka manao fonon-tànana, miakanjo manao akanjo tery, lava volo, lava volo mitafy satroka miaro, aza manao fonon-tànana, manapotipotipotika ary miasa maranitra dia tsy maintsy manao solomaso.
Raha miasa lathe tsotra ianao dia misy ireto antony manaraka ireto:
Ny lathe dia tsy feno tanteraka, ary ny mpiasa dia akaiky ny workpiece,
Ahodino matetika ny kodiarana tanana,
3 manafaka na manidy ny chuck
Ny lathe dia miantehitra amin'ny motera matanjaka be handroahana ny spindle hihodina amin'ny hafainganam-pandeha ary hiasa miaraka amin'ny fonon-tànana, noho izany dia mora tokoa ny voafandrika na voahidy amin'ny masinina.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny fitaovana mety amin'ny latina
Ireto antony manaraka ireto dia tokony hojerena rehefa mifantina ny karazana fitaovana:
(1) Fametahana milina habaka marobe araka izay azo atao amin'ny fotoana iray;
(2) Amin'ny dingan'ny fanapahana, ny fitaovana dia tsy afaka manelingelina ny fihodinan'ny workpiece;
(3) Afaka manatsara ny fahombiazan'ny milina sy ny kalitaon'ny haavony;
(4) Hery sy faharetana maharitra fitaovana.
1. Karazan-fitaovana fanodinana
Ny lathe CNC amin'ny ankapobeny dia mampiasa fitaovana mazàna clamp indexable. Ny fenitra sy ny vatan'ilay fitaovana azo soratana dia misy fenitra. Ny akora ampiasaina dia karbida simenitra, karbida simenitra mifono vy ary vy haingana.
Araka ny fiasa samy hafa dia azo zaraina ho an'ny mikraosin-tsolika izy io, ny mpanapaka kofehy ivelany, ny mpanapaka ny kofehy anatiny, ny fanapahana fanapahana, ny fanapahana ny lavaka (ao anatin'izany ny fandavahana ny lavaka afovoany, ny fanapahana mankaleo, ny paompy, sns.).
Rehefa ampiasaina hanamboarana ilay kodiarana tsy miovaova ilay fitaovana azo adika, mazàna izy io dia mandray ny firafitry ny visy, ny vilia fanindriana, ny visy na ny visy.
2. Misafidiana fitaovana akondro
Misy karazany roa ny fitaovana ampiasaina amin'ny famadihana vy haingana sy karbida simenitra.
Ny vy haingam-pandeha dia matetika fitaovana madinidinika, ny hamafiny dia tsara kokoa noho ny karbaôty simenitra, ary ny hamafiny, ny fanoherana ny fitafiana ary ny hamafin'ny mena dia ratsy kokoa noho ny karbaôty simenitra. Tsy mety amin'ny fanapahana fitaovana misy hamafin'ny hainganana sy haingam-pandeha haingam-pandeha. Ireo fitaovana fanapahana vy haingam-pandeha dia mila nohamafisin'ny mpanamboatra alohan'ny hampiasana azy, ary mety ny maranitra, izay mety amin'ny karazana fitaovana fanapahana tsy manara-penitra misy filana manokana.
Ny fampidirana karbida miorina amin'ny simenitra dia manana fahombiazan'ny fanapahana ary be mpampiasa amin'ny fihodinana NC. Ny sisin'ny karbida simenitra dia manana andiana famaritana mahazatra, ary ny masontsivana teknika manokana sy ny fahombiazan'ny fanapahana dia omen'ny mpanamboatra fitaovana.
Araka ny fenitra iraisam-pirenena (ISO), ny sisitsa karbida vita amin'ny simenitra dia mizara ho sokajy telo: p-vy, vy tsy metaly ary vy k-cast mifototra amin'ny hamafin'ny fihenan'ny karbaona vita amin'ny simenitra. Ny isa 01, 05, 10, 20, 30, 40 ary 50 dia ampiana aorian'ny kaody K, P ary m ho an'ny fizarazarana. Amin'ny ankapobeny, ny isan'ny kely kokoa dia ny avo kokoa ny hamafiny, fa ny ambany kosa ny hamafiny; Mifanohitra amin'izany, arakaraka ny maha-lehibe ny isany no avo kokoa ny hamafiny, fa ny ambany kosa no mihamafy.
Ho fanampin'izany, misy fitaovana fitaovana miaraka amin'ny hamafin'ny fitafiana ary mitafy fanoherana avo kokoa noho ny karbaida simenitra, toy ny seramika, nitrida borika borika ary diamondra.
Fikolokoloana sy fanitsiana ny milina Lathe
Rehefa mampiasa ny milina lathe dia tokony hojerena izao torolalana manaraka izao:
1) Ny fanjifana solika ao amin'ny fitoeran-tsolika rehetra dia tokony tazonina eo afovoan'ny refy menaka hatrany; raha tsy izany dia hitranga ny fanosorana tsy mahomby na ny fimamoana be loatra amin'ny famoizana herinaratra.
2) Ny menaka fanosotra rehetra dia tokony hosorana diloilo madio amin'ny fotoana maharitra.
3) Diniho matetika ny fikorianan'ny solika amin'ny alàlan'ny vera fahitana izay manome antoka ny fanosorana tsara ny vodin-doha sy ny boaty fahana.
4) Hamarino sy hanamboarana ny fihenjanan'ny fehikibo moto amin'ny fotoana maharitra.
5) Alohan'ny fandidiana isan'andro, alefaso mandritra ny iray minitra ny motera lehibe, ary avy eo ampandehano ny faritra rehetra amin'ny lathe tsy misy enta-mavesatra, fenoy menaka ao anaty fandroana menaka ao amin'ny lasely.
6) Miaraka amin'ny fihazakazahana amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, tsy avela ny fanovana tampoka ny id hafainganana.
7) Ny leadcrew dia ampiasaina amin'ny kofehy ihany. Aza mampiasa azy io mihitsy raha hiodina.
8) Rehefa mametraka fitsaharana tsy miova na fitsaharana mpanaraka, dia tokony hosorana diloilo ny tampon'ny fifandraisana.
1). Fanitsiana spindle
Ny fahazoan-dàlana be loatra amin'ny fitondra am-bolo dia mahatonga ny "fiasana tsy ho malama" Ny fahamendrehana amin'ny fihodinan'ny spindle dia misy ny fihazakazahana sy ny famoahana ny axial. Radial run-out dia azo antoka amin'ny alàlan'ny rojom-bolo roa eo alohan'ny spindle sy ny lozisialy radial thrust izay mitarika ny faran'ny spindle ary ny axial run-out dia azo antoka amin'ny alàlan'ny baolina tokana tokana ao ambadiky ny spindle. Ny fomba fanamarinana dia mifanaraka amin'ny laharana faha-5 sy faha-8 ao amin'ny taratasim-panandramana. Raha toa ka tsy miankina amin'ny zavatra angatahina ny marina, amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ireto misy fomba: ity amboary ny voanjo amin'ny spindle mba hanesorana ny fahazoan-dàlana amin'ny fitondra ampela. Ary hidio ny voanjo iray aorian'ny fanitsiana. Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny zavatra angatahina ny fihodinan'ny radial dia amboary ny fiorenan'ny aoriana amin'ny doka sasany voalaza etsy ambony. Rehefa vita ny fanitsiana dia alefaso amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny spindle mandritra ny adiny iray ary jereo fa tsy tokony hihoatra ny 70 ℃ ny mari-pana. Raha mihoatra izany dia vonoina aloha ny visy amin'ny voanjo napetraka, avy eo tokony hovahana kely ireo voanjo, aorian'ny fanitsiana azy, afatory ny visy hidy.
2）. Fanitsiana kodiarana
Ny fiovan'ny hafainganam-pandeha dia fehezin'ny levers eo alohan'ny loha-loha. Ny levers fanaraha-maso dia afaka mamindra kitapo mihetsika amin'ny alàlan'ny mekanisma kodiarana ahazoana fepetra samihafa. Raha ny hafainganam-pandeha tena izy dia tsy mitovy amin'ny hafainganam-pandehany voasokitra amin'ny hafainganam-pandeha manondro dial dia tokony hanao ny fanitsiana ny rojo vy kodia. Vahao aloha ny visy, afodio ny zoro eccentric, ataovy ny rojo mandra-pahatongan'ny setroka fanovana hafainganam-pandeha apetraka amin'ny toerana irina, avy eo, henjanina ny visy hahitana ny vatan-kazo amin'ny alàlan'ny baomba vy.
3). Fanitsiana ny kalesy
Ny fahazoan-dàlana eo anelanelan'ny slide slide sy ny lalana mitarika ary ny eo anelanelan'ny slide rest and compound dia ahitsy amin'ny alàlan'ny tsipika tsirairay avy. Raha ny zava-misy ao an-damosin'ny lamosin'ny felam-boninkazo vokarin'ny volon'ny voanjo azo ovaina, vahao ny visy eo amin'ny voanjo dia alao ny volo miaraka amin'ny visy mandra-pialan'ny backlash. Hamafiso avy eo ny visy.
4). Fanitsiana fihenam-bidy amin'ny moto
Ny môtô fiara lehibe dia napetraka amin'ny tongotra lathe. Atsaharo ny fonony eo alohan'ny tongotra lathe, ny fihenjanan'ny fehikibo dia azo ahitsy amin'ny fanovana ny fironana amin'ny takelaka motera amin'ny alàlan'ny voanjo. Ny fihenjanan'ny fehikibo ataon'ny môtô dia miankina amin'ny elanelana misy eo afovoan'ny pulley motera sy ny an'ny pulley an'ny headtock.
Fanadihadiana lesoka mahazatra an'ny milina Lathe, ary fomba fitsaboana
Tsia Fiatoana Antony Fomba fanadiovana
1 Hery tsy afaka
Ampitaina amin'ny masinina
Tsy azo kitihina ny switch switch Sokafy ny varavarana ahodin-doha ny visy amin'ny switch, afindrao araka ny tokony ho izy ny switch, avy eo atsangano indray ny visy
2 Tsy afaka mandeha ny motera Spindle Tsy ampiasaina ny switch switch Sokafy ny varavarana ahodin-doha ny visy amin'ny switch, afindrao araka ny tokony ho izy ny switch, avy eo atsangano indray ny visy
3 Ny fanaraha-maso mpanova dia may Ny tanjaky ny herinaratra amin'ny mpampiasa dia tsy mifanaraka amin'ny voltatra voatondro. 1. Araka ny asa nampanaovina anao, soloy ny jiro amin'ny "24v, 40w" iray
2. Soloy ny mpanova anao.
4 Ny tantana amin'ny loha-loha dia tsy afaka
Mifindra toerana, ka afaka ny hafainganana
Tsy azo ovaina
1.Ny visy napetraka dia miovaova
2. Ny plank napetraka dia miovaova.
1. Atsaharo amin'ny tanany ilay takelaka boribory, ary hamafiso ny visy apetraka.
2. Hamafiso ny visy roa amin'ny zana-kazo.
5 Rehefa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany ny spindle dia tsy afaka manova hafainganana izany Ny voanjo amin'ny tsipika eccentric, izay napetraka amin'ny slider spindle, dia lasa miovaova. Vohay ny fonony ambony amin'ny loha-doha, ahodino ny tsora-kazo miavaka, ary alefaso amin'ny hafainganam-pandeha avo, hafainganam-pandeha na toerana tsy misy tohana ny tahony .Raha afaka miditra amin'ny fomba ara-dalàna ny clusters-nify dia afatory ny voanjo.
6 Ny spindle ao anaty loha dia manomboka miadana Ny elanelan'ny kapila fikikisana amin'ny hazo zana-kazo ao anaty loha dia lehibe. Aorian'ny fanitsiana ireo kapila fikorontanana dia atsangano ny levers control spindle mba hizaha toetra azy mandra-pahatongan'ny spindle amin'ny toe-javatra mahazatra.
7 Ny lathe dia mihetsiketsika rehefa mandeha izy na ny fahasarotan'ny workpiece dia tsy miankina amin'ny fepetra takiana. 1. Ny fanitsiana ny spindle sy ny fivorian'ny kalesy dia tsy marina.
2. Goavana loatra ny zorony na ny sakoroka.
3. Tsy marina ny fitaovan'ny fitaovana.
4. Tsy ampy ny tanjaky ny shank. Na lava loatra ny cantilever.
5. Tsy dia mandeha tsara ny fandrindrana eo amin'ny slide slide sy ny saddle.
1. Amboary amin'ny fomba mety ny tadiny amin'ny spindle sy takelaka roa eo anoloana
2. Fitotoana ny fitaovana arakaraka ny fepetra takiana.
3. Misafidiana fitaovana mety mifanaraka amin'ny fitaovana workpiece work
4. Manitsy ny halavan'ny tanimanga.
5. Atsaharo ny slide slide.
8 Ny tahan'ny taper an'ny sangan'asa dia tsy ao anatin'ny fepetra takiana rehefa ampiasaina hampiodina ny varingarina ivelany ny masinina. Ny fametrahana ny masinina dia tsy marindrano Ampifanaraho ny lathe araka ny manual Operation ation
9 Ny lathe tsy afaka manome sakafo ho azy. 1. Lever fanovana kofehy havia sy havanana dia tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy.
2. Miala ny valizy swing.
1. Zahao ny levera. Rehefa eo ankavanana izy dia afaka misakafo ara-dalàna ny masinina, rehefa eo ankavia izy dia tsy afaka mamahana ny masinina.
2. Miovaova ny voanjo amin'ny fefy. ka novonoina ny valizy swing. Amboary ny kodiarana manenjana ny voanjo amin'ny fefy.
10 Apron tsy afaka mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha 1. Dorana ny fuse.
2. Ny bokotra dia tsy afaka mifandray.
1. Ovao ny fiuse.
2. Sokafy ny tahony mihetsika haingam-pandeha ary esory ny bokotra: amboary ny teboka roa sy ny fifandraisana. Mandritra izany fotoana izany, tsindrio ireo teboka, avereno amboary ny bokotra.
11 Avo ny tabataba rehefa mandeha ny milina. Potika ny bearings. 1. Raha avo ny tabataban'ny zana I aorian'ny fanombohan'ny motera dia simba ny fitondra amin'ny zana I.
2. Rehefa manainga ny tohana fanaraha-maso mba hihazakazaka ampela, avo ny tabataba ， rehefa manangana ny tahony hampijanona ny spindle, fa avelao ny tohatra hafa handeha, ambany ny tabataba. Mampiseho izany fa simba ny fitondra amin'ny ampela。
12 Misy zavatra tsy maintsy tsikaritra rehefa mametraka ny lathe. 1. Ny motera dia mihazakazaka amin'ny lalana iray ihany aorian'ny fampifandraisana ireo tariby. Aza manova ny filaharan'ny dingana amin'ny motera tokana.
2. Tokony horavana ny taratasy fanombohan-diloilo ary diovy tsara aorian'ny fametrahana ny masinina.
3. menaka menaka misy menaka manitra 20 # amin'ny ririnina na 30 # amin'ny fahavaratra。DO aza soloina menaka manitra ampiasaina amin'ny fiara na menaka hydraulic.